Beddelaan Euro In Oo shilin Soomaali
UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 10:44
Euro In Oo shilin Soomaali beddelaad. Euro qiimaha maanta ee Oo shilin Soomaali maanta suuqa sarrifka lacagta.
1 Euro = 617.46 Oo shilin Soomaali
Celceliska sarrifka. Bangiyadu waxay ku hawlan yihiin wareejinta Euro loo beddelo Oo shilin Soomaali. Tani waa tixraac ku saabsan heerka sarrifka lacagaha. 1 Euro hadda waa isle'eg 617.46 Oo shilin Soomaali. Heerka Euro wuxuu sare u kacay ilaa shalay. The Euro sicirka doolarka Mareykanka ayaa kor u kacay Oo shilin Soomaali by 0 boqol meelood meel barta boqolleyda.
Oo shilin Soomaali (SOS)
Heerka Sarrifka Euro In Oo shilin Soomaali
Usbuuc ka hor, Euro waa la isweydaarsadaa 593.55 Oo shilin Soomaali. Hal bil ka hor, Euro waxaa lagu iibin karaa 599.93 Oo shilin Soomaali. Lix bilood ka hor, Euro waxaa lagu iibin karaa 640.72 Oo shilin Soomaali. Halkan waxaa lagu muujiyay jaantus heerka isdhaafsiga waqtiyo kala duwan. 2.92% - isbeddelka heerka sarrifka ee Euro to Oo shilin Soomaali bishii. -13.84% - isbeddelka heerka sarrifka ee Euro to Oo shilin Soomaali sanadkii.
Saacad Day Usbuucii Bisha 3 bilood Sannad 10 sano
Heerka Sarrifka Euro (EUR) In Oo shilin Soomaali (SOS) Ku nool suuqa sarrifka Forex
Bedelaha lacagaha Euro Oo shilin Soomaali
Euro (EUR) In Oo shilin Soomaali (SOS)
1 Euro 617.46 Oo shilin Soomaali
5 Euro 3 087.31 Oo shilin Soomaali
10 Euro 6 174.63 Oo shilin Soomaali
25 Euro 15 436.57 Oo shilin Soomaali
50 Euro 30 873.13 Oo shilin Soomaali
100 Euro 61 746.26 Oo shilin Soomaali
250 Euro 154 365.65 Oo shilin Soomaali
500 Euro 308 731.30 Oo shilin Soomaali
Waad isdhaafsan kartaa 6 174.63 Oo shilin Soomaali for 10 Euro. Hadaad leedahay 25 Euro, ka dibna gudaha Soomaaliya waad iibsan kartaa 15 436.57 Oo shilin Soomaali. Maanta, 50 Euro waxaa laga iibsan karaa 30 873.13 Oo shilin Soomaali. Hadaad leedahay 100 Euro, ka dibna gudaha Soomaaliya waa lagu iibin karaa 61 746.26 Oo shilin Soomaali. Hadaad leedahay 250 Euro, ka dibna gudaha Soomaaliya waad iibsan kartaa 154 365.65 Oo shilin Soomaali. Beddelashada 500 Euro qiimaha 308 731.30 Oo shilin Soomaali.
Euro In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka
Euro In Oo shilin Soomaali maanta 24 May 2022
24.05.2022 591.407994 27.390588 ↑
23.05.2022 564.017406 -9.085896 ↓
22.05.2022 573.103301 -38.026315 ↓
21.05.2022 611.129617 5.595451 ↑
20.05.2022 605.534166 4.716628 ↑
Maanta 591.407994 SOS = 500 EUR. Euro ilaa Oo shilin Soomaali ee 23 May 2022 - 564.017406 Oo shilin Soomaali. 22 May 2022, 1 Euro kharashyada 573.103301 Oo shilin Soomaali. Ugu badnaan EUR / Heerka SOS heerka bishii ugu dambeysay ayaa ahaa 21.05.2022. Heerka ugu yar EUR / SOS sicirka wuxuu ahaa 23.05.2022.
Euro In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Euro iyo Oo shilin Soomaali calaamadaha lacagta iyo waddamada
Euro calaamadda lacagta, Euro calaamad lacag: €. Euro Gobolka: Austria, Akrotiri iyo Dhekelia, Andorra, Belgium, Vatican, Germany, Greece, Ireland, Spain, Italy, Cyprus, Kosovo, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Portugal, San Marino, Slovenia, Finland, France, Montenegro, Estonia. Euro lacagta code EUR. Euro Qadaadiic: eurocent.
Oo shilin Soomaali calaamadda lacagta, Oo shilin Soomaali calaamad lacag: Sh. Oo shilin Soomaali Gobolka: Soomaaliya. Oo shilin Soomaali lacagta code SOS. Oo shilin Soomaali Qadaadiic: boqolkiiba.